Barbaadi Barruu-Guutuu - Barbaadi
Fankiishiniin barbaada guutuu barruu LibreOffice Gargaartuu keessaa makii jechoota barbaadi kamiyyuu galmeewwan Gargaartuu barbaaduudhaaf si dandeessa.Kana gochuuf, Search term keessatti jecha tokko ykn tokkoo ol katabi.
Dirreen barruuJecha barbaadijechoota jalqaba galchite kuusa. Barbaada duraa irra deebi'uuf, sarjoo xiyyaa cuqaasuun jechicha tarree keessaa filadhu.
Erga barbaadi raawwateen booda, matadureewwan galmee tarree keessatti mul'atu. Galfata lama cuqaasi yookaan galmee gargaartuu walfakaataa fe'uuf filadhu Agarsiisicuqaasi.
Barbaadni akka matadureewwan galmee irratti qofa ta'uufMatadureewwan keessaa qofasanduuqa filannoo fayyadami.
Sanduuqni filannooJechoota guutuu qofa barbaada sirrii akka gootu si dandeessisa. Yoo saanduqni kum mallattefame, jechootni haanquun hin argataman. Yoo jechi barbaadi kee akka qaama jecha dheeraatti argama taanaan sanduuqicha hin mallateessiin.
Makaa jechoota barbaadde galchuu dandeessa, iddooleetin kan adda bahan. Barbaadni qub-sukanaawaa miti.
Yeroo mara barbaadni kasaa fi barruu-guutuu fayyadama ammee filatametiif LibreOffice fayyadama.
Title is: Barbaadi Barruu-Guutuu - Barbaadi